२८ माघ, कपिलबस्तु । बाणगंगा नगरपालिका – ८ बोट्गाउँ ओसो तथागत ध्यान केन्द्रमा आईतबार अरुण स्वमी द्वारा सत्सङ प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ओशो तपोवन नेपालका प्रमुख तथा श्रद्धय अरुण स्वामी जि द्वारा कपिलस्तुको ओसो तथागत ध्यान केन्द्रमा भएको सत्सङ प्रवचन कार्यक्रममा सयौंको संख्यमा सन्त स्वामी जि अनि मा जिहरुको उपस्थिति भएको हो ।
सत्सङ प्रवचन कार्यक्रममा अरुण स्वामी जिले सत्य के हो भने धार्मिक कर्मकाण्ड अध्यात्म होइन, अध्यात्म अन्तर को विज्ञान हो जसले मनलाई आनन्दित तुल्याउँने बताउँनुभयो । उहाँले अहिलेको युगमा विज्ञान र प्रविधिले जीवनलाई सजिलो बनाइदिएको छ तर यसले धेरै किसिमका समस्या पनि ल्याएको बताउँदै मान्छेमा दिनदिनै मानसिक समस्या बढ्दै गएको बताउँनुभयो । अध्यात्मको बाटोबाटै मानसिक समस्याको अचुक उपचार हुन्छ । त्यसैले उहाँ विश्वभर ध्यान र अध्यात्म जागरण अभियान चलाउँदै आउँनुभएको छ ।
उहाँले अब ५ बटा एजेण्ड लिएर मेची महाकाली यात्रा सुरु गर्ने जनकारी दिनुभयो । अध्यात्मीक चिन्तन भएको अरुण स्वामीले स्वस्थ्य, बातावरण, च्यारेटी, एक दम्पती एक सन्तान र हाँसेर रामऔं यी ५ वटा एजेण्ड मानव जगतलाई सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने भएकोले मेची मकाली यात्रा गर्ने बताउँनुभयो । अरुण स्वामीले स्वस्थ्य हुनको लागी प्रर्यवरण जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै जन्मदिनमा ५ वटा विरुवा अनिवार्य लगाउन आवश्यक रहेको धारण समेत राख्नुभयो । त्यस्तै उहाँले आफुले कामएको केही अंश समाजिक कार्यमा सहयोग गर्नुको साथै एक दम्पत्ती एक सन्तान र हरेक कार्यमा हाँसेर गर्नुपर्ने बताउँनुभयो ।
उहाँले कुनै पनि काम पछि गर्छु थाती राख्न नहुने बताउँदै ध्यान पनि जवन छु भन्दैमा पछि गर्छु वा हामीले कुनै कामलाई भोली भनेर छोड्नु नहुँने बताउँनुभयो । उहाँले नेपालमा भोली गछु भन्ने शैली एउटा संस्कृति बसिसकेको भन्दै नेपालमा त कुनै पनि काम सहि समयमा हुँदैन भन्दै जुन सुकै काम भोली भोली भन्दै एउटा ठुलो रोग रहेको टिप्पाणी समेत गर्नुभयो । उहाँले भोली के हुँन्छ ? कसैलाई थाहाँ छ ? कसैलाई थाहाँ हुदैन, त्यसैले कुनैपनि काम भोली भनेर छोड्न नहुँने भन्दै आजको काम आजै गर्नु पर्ने भोली हाम्रो नियन्त्रणमा नरहेको बताउँनुभयो । उहाँले मनिस एउटा नाटकको पात्र रहेको भन्दै जिन्दगीमा हाँसौं । राम्रो कार्म गरौ र दुनियाँलाई पनि हाँसऔं भन्ने कुरा स्पष्ट पर्नुभयो ।
अरुण स्वामीले प्रर्यवरण संरक्षण गर्दै ओसो तथागत ध्यान केन्द्रको छेउछाउँ बाणगंग नदीको किनरामा १ लाख बृक्षरोपण गर्दै ओशो केन्द्रलाई अकार्षक केन्द्रविन्दु बनाउने आवश्यक रहेको बताउँनुभयो ।
‘ध्यानले सकारात्मक सोचको विकास हुँन्छ’ :पूर्व मन्त्री दिपकुमार
नेपाल कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री दिपकुमार उपाध्यायले ध्यानले सकारात्मक सोचको विकास हुने बताउँनुभयो । उहाँले ध्यान र सधान गर्दा मनलाई अनान्द हुने बताउँनुभयो । उहाँले यो ठाउँ अध्यत्मीक शक्ति रहेको भन्दै आफुले पनि नियमित ध्यान गर्ने गरेको बताउँनुभयो । उहाँले ध्यान गर्दा सकारात्मक सोचको विकास हुने र सबै मनिसहरुले स्वस्थ्य जिवन जिवनको लागी र असल मनिस भएर बाँच्नको लागि ध्यान मनव जिवनमा निकै उपयोगी रहेको स्पष्ट पर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न किसिमका समाजिक बिकृतिहरु फैलिरहेको भन्दै यसलाई मनोबैज्ञानिक उपचार, ध्यान र सकारात्मक सोचको विकास गर्दै ती बिकृतिहरुलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँनुभयो ।
‘ओसो केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरु क्रमश पुरा गर्छौंं’: उपमेयर चक्रपाणी
बाणगंगा नगरपालिका उपमेयर चक्रपाणी अर्यालले ओशो तथागत तथा ध्यान केन्द्रमा आवश्यक पूर्वधरहरु क्रमश पुरा गर्दै जाने बताउँनुभयो । उहाँले ओशो तथागत ध्यान केन्द्र हाम्रो सम्पती रहेको भन्दै यस क्षेत्रको विकास गर्न बाणगंगा नगरपालिकाको सहकार्य रहिरहने प्रतिवद्धता समेत गर्नुभयो । उपमेयर अर्यालले ध्यान केन्द्रको आवश्यकता पुरा गर्न हाम्रो नगरबाट यस ओशो केन्द्रलाई सहयोग गर्दै एउटा नमुना ओसो केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने बताउँनुभयो । ओशो तथागत तथा ध्यान केन्द्रको विकासको लागी १ लाख ३५ हजार भन्द बढी सन्त स्वामी जि हरुले आईताबार आर्थिक सहयोग नर्गुभएको थियो ।
अरुण स्वामी द्वारा बृक्षरोपण
अरुण स्वामीद्वारा बृक्षरोपण समेत गरिएको थियो । विभिन्न स्वामी र मा जी लागत अन्य नेपाली कागेंसका नेता तथा पूर्व मन्त्री दिपकुमार उपध्याय, उपमेयर चक्रपाणी अर्याल लगायतको विशेष उपस्थितिमा स्वमीको विरुवा लगाईएको थियो । त्यस्तै सत्सङ प्रवचन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उप–सभपति तरावाती चौधरी, स्वामी तथा वडा अध्यक्ष गुणनीधि भुषाल, स्वमी कृष्ण मोहन, मञ्जु माजी, स्वामी गगन, स्वामी योगनन्द, स्वामी बैरागी, स्वामी केशव सपकोटा, स्वामी घनश्याम घिमिरे, स्वामी दिन बहादुर लगायतको सयौंको उपस्थिति रहेको थियो ।